Ajụjụ ọnụ Ayhan Karaman Banyere SEO - Ne gerekir?
Nche, Ọsọ, Multilingual saịtị, SEO mmelite
Ayhan Karaman, onye nchoputa ayhankaraman.com na onye edemede nke SEO Book
Ayhan KARAMAN O doro anya na onye ọkachamara SEO a kacha mara amara na Turkey. N'ihi na ọ bụ onye okike iji kwalite onwe ya na ihe ọ na-eme nke ọma. Ihe mere ya pụrụ iche bụ na ọ na-akọrọ anyị ụzọ niile na ozi a n’ihu ọha. Mgbe ị kpọtụrụ ya, ọ ga-aza ajụjụ ọ bụla ị jụrụ. Nweta ọnụ ọgụgụ ya dị oke mfe, ọ na-adị mma ịnwe izute Ayhan Karaman mgbe ọ kpọrọ oku. Ayhan Karaman bụ akara nke m na-eche n’ezie na ọ ga-abịa.
Havekwadebela akwụkwọ mbụ emelitere n'ụwa. SEO akwukwo. Nke a ọ juru anyị anya mgbe anyị nwesịrị ihe ịga nke ọma? N'eziokwu n'eziokwu 🙂 Dịka I kwere nkwa 🙂
Anyị maara etu ị si enwe mmetụta na nkwa gị dịka ụmụazụ gị. Na-emeghe oge niile maka mmepe na mmelite, ị gaghị ezochi ozi na imekọ ihe ọnụ. Ọ bụ ya mere m ji gụọ ebe niile na ị bụ ezigbo mmadụ na onye nwere ntụkwasị obi. O doro anya na anyị na-eche otu ụzọ ahụ.
Ihe ntinye ederede gi bu ezigbo ndu. Anyị na-akwado ndị na - agụ akwụkwọ anyị ka ha gụọ isiokwu gị.
Kedu ka ọdịnaya dị n'akwụkwọ gị si dị iche na ọdịnaya dị na YouTube na Blog gị?
Nke mbu, aga m ekwu maka akuko akwukwo m. Abughi m onye kwenyere na enwere ike iji oru a rụọ ọrụ a, enweghịkwa m mmasị n'akụkụ akwụkwọ ahụ. Nke mbu, akwadoro m akwukwo nta puru iche nye ndi biara na nkuzi m ma nata ezigbo nzaghachi. Dabere na nzaghachi ndị a, amalitere m ịkwadebe akwụkwọ ahụ site na ịsị gịnị kpatara Ayhan. Ma, m na-akụtu ihe! Ikwenyeghi ihe kpatara i jiri wepu ya? N'ihi na: Ọ gaara dị iche.
Ekwuru m, olee otu ị ga-esi dị iche n'akwụkwọ a, Ayhan? Ikwesiri imelite ya, maka ndu. Ekwesighi ebubo gị mgbe ị na-emelite, ị gaghị akwụ ụgwọ ụgwọ mbupu. N’ime ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe, enweghị akwụkwọ a na-ewepụ, a naghị akwụ ụgwọ oge ọ bụla ọ pụtara.
Abara m ụzọ ma emechaa.
Ndi isiokwu nke ihe odide mbu nke mbu nke 1 (ebe edeghariri ma megharia ihe di n'ime ya) ka etinyekwara. Ọ bụ akwụkwọ ebe m mere atụmatụ QR na ọdịnaya YouTube m, gụnyere ọdịnaya pụrụ iche, wee nye echiche SEO.
Agba nke 2 bụ ihe m chọrọ. Emelitere m akwụkwọ ọkọwa okwu ahụ ma mee ka ọ na-ezi ihe. M kwukwara redirects. Emere m rediregharị n'etiti ibe. Enweela m ntụziaka iji kwado ndepụta nyocha. M gụnyere SEO pụrụ iche maka E-Commerce SEO na ndị na-emepụta ọdịnaya. Emelitere m ama ama otu egwuregwu bọọlụ ama ama 😊
Ọ ga - ekwe omume ka ị gosipụta ụfọdụ saịtị saịtị nke gbagoro n'usoro ọzụzụ gị ma ọ bụ ndụmọdụ gị?
Ọ ga-amasị m ịgwa gị gbasara ọrụ asligold.com.
Gịnị ka anyị mere?
Nke mbụ, anyị nyeere aka na usoro ịtọlite ​​weebụsaịtị na ịbanye ngwaahịa. Ọ na-anata nkwado sọftụwia pụrụ iche site n'aka mmadụ. Anyị kpebiri ịrụ ọrụ ubu na ụlọ ọrụ ngwanrọ wee malite nyocha nyocha.
N'ihi nyocha anyị na ụzụ, anyị wetara ọnọdụ ahụike nke saịtị ahụ site na 12-15 ruo ọkwa 92. Enwere nsogbu na nkọwa nkọwa, ibe ụmụ mgbei, njikọ gbajiri agbaji, nsogbu ntụgharị, nnukwu njehie onyonyo, njehie URL, nsogbu nsogbu ALT. Anyị edozi ọtụtụ n'ime ha n'ime ọnwa atọ mbụ.
Anyị emepụtala ọdịnaya nke na-enyere onye njedebe ikpeazụ aka ịza azịza nye ajụjụ ndị ha chọrọ ịma. A kwadebere ọdịnaya ndị a n'ụzọ na-agaghị agafe omume nke omume onye ọrụ e-commerce. (Nke ahụ bụ, anyị emepụtaghị ọdịnaya ruo ogologo oge. Ebumnuche: Onye ọrụ na-abata chọrọ inyocha ngwaahịa ahụ na ịzụrụ ya. Anyị ekwesịghị ime ihe ọ bụla iji metụta omume a n'ụzọ na-adịghị mma.
Maka ụfọdụ, ma ọ bụghị ha niile, ngwaahịa, anyị akwadebewo mkpali ịzụta. Anyị malitere ịhụ onyinye nke a na obere oge.
Anyị zubere mgbasa ozi Social na mgbasa ozi Google. Mgbe anyị bidoro inwe ezigbo ego, anyị mere ka ego anyị bịa wee bido usoro nrụzigharị. Na nyocha nyocha ọchụchọ, anyị kpebiri peeji ọdịda nke okwu ndị dị na 100 kachasị wee kwado ibe ndị ahụ na mkpọsa oge.
Ọzọ, anyị mere atụmatụ njikọ maka ibe ọdịda dị mkpa. Anyị lekwasịrị anya na njikọ njikọ ndị ekpughere na nyocha ndị asọmpi na isi mmalite njikọ anyị kpebiri. Mgbe anyị nwetara njikọ ahụ, anyị hụrụ mmelite na ogo ọzọ.
Anyị mepụtara ọdịnaya blog. Isi akụkọ na-akpali mmasị, ndụmọdụ ga-abara onye ọrụ njedebe uru, ma kpọọ oku ka ị mee ihe ga-eduzi gị ozugbo na ngwaahịa a. Anyị jiri akụkụ blọọgụ ọ bụghị naanị iduga ngwaahịa ahụ, kamakwa iji gbakọba ndị na-ege ntị na-echegharị wee weghara ndị ọbịa n'akụkụ blog.
Anyị maara na ịkwalite ọnụ ọgụgụ nke ụdị ngwaahịa na ọnụahịa nyekwara aka n'ụzọ dị mma na usoro SEO. Anyị mere nke a maka akara Aslı Gold.
Akụkọ ihe ịga nke ọma nke Ayhan Karaman kere na asligold.com
A njem site na efu ka ihe ịga nke ọma.
Ihe omuma nka na ihe omuma ezughi ezu. Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ihe ịga nke ọma na E-Commerce na SEO, nsogbu ndị dị ka arụmọrụ, mmekọrịta ndị ahịa, mgbe ahịa na lọjistik nwere onyinye dị mkpa na nke a. Aslı Hanım duziri akụkụ a nke ọma. N'ezie ọ nọ na Istanbul, anyị nọ na Samsun.
Kedu usoro na-echere ndị ọrụ ibe gị ndị ga-enweta ndụmọdụ ma ọ bụ ọzụzụ n'aka gị? Kedu ụdị usoro ị ji arịgo usoro ndị ahụ?
Mgbe SEO mere nke ọma, Google agaghị enwe mmetụta na ya ma kwụghachi weebụsaịtị anyị. SEO abughi uzo ozo kwesiri itinye ego na ya. Echere m na m akwadebewo ezigbo ọzụzụ SEO n'ịntanetị maka ndị a ga-azụ m ka ha ghọta nrọ ha na ebumnuche ha.
Ask jụọ ihe kpatara ya?
Ayhan KARAMAN SEO usoro ọzụzụ na-akwado gị maka ezigbo ọnọdụ SEO. Njem mmụta agụmakwụkwọ ekwesịghị ịga n'ihu naanị vidiyo ma ọ bụ usoro dị njikere. Karịsịa na akụkụ SEO, nke a ekwesịghị ịbụ ikpe. Anyị kwesịrị iguzo n'otu ubu ma rụọ ọrụ ọnụ. N'oge a, mụ onwe m na-emeso ụmụ akwụkwọ m ihe site na ọrụ ha ma na-eme ọmụmụ ihe iji bulie arụmọrụ ha.
N'ezie, ọzụzụ SEO m kwuru bụ ọrụ ga - enyere gị aka ịzụlite ikike ị chọrọ maka ọkwa, nweta ihe ọmụma ọkachamara banyere weebụ, jụọ ọtụtụ ajụjụ ịchọrọ, ma nọrọ na usoro mmụta na mmepe na-aga n'ihu.
Mụọ mbụ, mgbe ahụ were ọrụ ahụ ma mezue ya. Tụlee ọzụzụ ebe achọpụtara ihe na-anaghị emezi emezi ọnụ, mechie ọnụ, lelee ọnọdụ ugbu a, yana esoro mmelite arụmọrụ ya. Cheedị usoro ị ga - ajụ ọtụtụ ajụjụ ịchọrọ, nweta oge ndụ gị niile ma mụta maka SEO.
Ndị mmadụ ga-anata ọzụzụ na ndụmọdụ nwere ike ime ka atụmanya ha dị elu. N'ihi na ana m edebe okwu m.
Tried nwara ịghọta Google. Ya mere, olee nkwubi okwu ị bịara? O doro anya na ihe Google na-atụ anya n'aka anyị?
Google na-atụ anya ka anyị ihe ndị ọrụ chọrọ. Ọ ga-amasị m iji ihe atụ kọwaa.
Ọ bụrụ na onye ọrụ na-achọ oyi taya, gosi ya oyi taya ma ghara inye ya uru nke oyi taya! Mgbe ị na-achọ oyi taya, anyị na-abịa gafee ibe weebụ na-ere oyi na taya. N'ebe a, anyị na-ahụ na Google bụ igwe nchọta nke na-aghọtakwa ebumnuche ndị ọrụ.
Anyị kwesịrị ịhazi peeji nke, ọdịnaya na saịtị dịka ebumnuche ọchụchọ nke ndị ọrụ. Nke a bụ otu ihe dị mkpa nke SEO.
Enwere nzọụkwụ enwere ike ịme iji mee ka saịtị mara Google anya ozugbo enwere ike site na oge ọ dị ndụ?
Ahụ ike ga-abụ ịgbakwunye saịtị anyị na Google Search Console tool and use the Google URL Inspection tool. Maka inweta ndepụta ngwa ngwa, ọ dị anyị mkpa izere ọmụmụ ihe. Ozugbo anyị kwuru na anyị mepee saịtị ahụ, ihe ndị dị na ya dị mma, anyị adịla njikere maka akụkụ ahịa ahụ, anyị aghaghị ịchọta ụzọ isi weta ndị ọrụ n'ezie na saịtị ahụ.
A na-enwe ekele maka ọdịnaya "SEO Team" gị na ụlọ ọrụ ahụ. Jisie na mmuo gi. Maka ndị na-amaghị; SEO Otu. Anyị chọrọ ịkwadebe ajụjụ maka ọkpụkpọ ọ bụla na-ekwughi na ọdịnaya gị. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n’ime ha dị ịtụnanya, ekwenyere m na ha bụ isiokwu chọrọ ịmata ihe.
1. Onyenchekwaebumnobi - Nchedo
Anyị na-ahụ ọkwa na ala nke saịtị ọ bụla na-ekwu na ikike niile echekwabara. Ajụjụ a bụ maka usoro nchọpụta ikike na ndebanye aha. Mgbe ịzụrụ ngalaba, e debara aha ngalaba ahụ na anyị onwe anyị. Anti-ezu ohi na nzuzo nchịkọta ndị dịnụ. Mana ọ dịghị ka ụda o zuru ezu.
Kedu ihe a ga-eme iji zere izu ohi nke echiche saịtị, isiokwu saịtị na onyonyo? Kedu ụdị ụzọ anyị kwesịrị ịgbaso iji dee ikike niile echekwabara?
O yighị ka ọ dị mfe igbochi nke a ebe a. Ihe obula mmadu choro izuta ya ga ewere ya ozo. Ọ ga-ama aka, mana ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ịchọ ikike gị site na iji usoro iwu. Ya mere, m na-ekwu maka ịdebanye ihe oyiyi. M na-akwado DMCA maka ọdịnaya.
2. Aka nri - Speed
N'isiokwu gị, ị kwuru ọtụtụ usoro dịka nzuzo na njikarịcha. Faịlụ anyị nwere ọtụtụ nsogbu nwere GIF na onyogho. Anụrụ m ebe ọ bụla na .png usoro na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ sie ike karị. Na-ejikwa ihe oyiyi eme ihe mgbe nile, ụfọdụ n'ime ihe mkpuchi gị nwekwara GIF, mana oge ntinye nke ihe oyiyi na GIF na saịtị gị dị ngwa ngwa.
Kedu ihe i ji ọsọ saịtị ọsọ?
Emechara m nyefee ụdị onyonyo nwere ndọtị .gif. O siri ike ebuli. Isi okwu m na-ebuli isiokwu GIF ma achọghị m iji ya. Ọ bụrụ na a ga-eji ya, ana m akwado ka eji ya mgbe m belata ya nke ukwuu.
Ọzọkwa, ọ bụ oge iji ụdị .webP anya. Enwere m ike ịkwado ngwa mgbakwunye ShortPixel maka WordPress.
3. Aka ekpe - Ndenye ederede
Ajuju a bu maka ndi choro ime ka blog ha bu saiti.
Asụsụ ọtụtụ asụsụ kwesịrị iji / en ma ọ bụ en. o kwesiri iji ya? Ọ ga - ebute mmetọ ọ bụla na saịtị anyị?
Ọ bụrụ n ’inyefe ọrụ n’ọ karịrị otu asụsụ, ị na-achọ ihe karịrị otu mba. Ọ bụrụ na ị ga-aga ahịa ọzọ, ana m akwado ụzọ subdomain. Ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya iji en.siteadre.com kama siteaddaddress.com/en. Echere m na ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya maka ijikwa ọwa arụmọrụ na saịtị ahụ.
Ọ bụrụ na e nwere nsụgharị nke ibe dị mkpa dị na asụsụ dị iche na ibe nke asụsụ dị iche iche, ana m akwado iji akara asụsụ. (Hreflang mkpado)
Ka anyị gaa na mapụ saịtị. Ikwesiri inwe URL nke ichoro ka ị gosiputa ihe na saiti. Okwesighi ịbụ onye ọzọ.
Kedu ka o si kwe omume ịnye ọkwa na nyocha nke mba ofesi na ibe anyị kwadebere dịka asụsụ ahụ si dị?
Ọ bụ otu ihe ahụ na mba niile dabere na SEO. Ihe agbanweela bụ etu obodo si emegharị ahụ. Kedu ihe ndị asọmpi na-eme? Ebee ka ọ si enweta njikọ ahụ? Kedu ọwa ndị ha nọ n'ọrụ? Kedu ka ihe ndị ahụ dị? Kedu ebumnuche ọchụchọ ahụ? Ọ dị oke mkpa ịme karịa ndị asọmpi na-achịkwa ndị a ma na-eduzi mpaghara ahụ.
4. Nkwụsị - Ọdịdị Nhazi ụlọ
Mgbe anyị zụtara ngalaba anyị, anyị na-azụkwa akụkọ ihe mere eme. Mgbe m nwetara adrekir address, Achọrọ m iwepu ọtụtụ narị URLs otu na otu site na Search Console, n'agbanyeghị na edeghị ha na google. Ọ bụ na anyị ga-emegharị URL gaa na ibe, edemede na ibe mbata nwere ike jikọta ya na ntụgharị 301?
Kedu ka anyị si emeso akụkọ ntolite nke ngalaba anyị?
Ọ gaghị adị mma ka anyị degharịa peeji nke enweghị ihe ọ bụla gbasara anyị. Ọ bụrụ na ọ bụghị iwu na-akwadoghị ihe ngalaba aha mere n'oge gara aga, anyị ekwesịghị ime nsogbu a. Karịsịa anyị ekwesịghị redirect ka n'ụlọ peeji nke.
5. Ihe nkwụsị - nnweta
Anyị nwere ike imeziwanye saịtị anyị site na ịchọpụta na eserese na bọtịnụ ụfọdụ na-apịa ya na eserese okpomọkụ, n'agbanyeghị na enweghị njikọ. Mana oge ụfọdụ ndị mmadụ n’etinye oghere ndị n’adịghị nghọta.
Mee uche nke ndị ọrụamGịnị ka anyị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na omume anyị na-agakarị?
Ọ bụrụ na atụmanya nke ndị ọrụ nọ na ntụzịaka a na nke a bụ ọnọdụ a na - agakarị, anyị kwesịrị ịnwale ijikọ ma lelee nsonaazụ ya.
6. Midfielder - Okwu
Fọdụ okwu ọchụchọ na ọdụ nwere ike ịdịrị ibe ha nso. Ọmụmaatụ, anyị chọrọ ọkwá ma ndị Keywords "Achọrọ m ime SEO" na "olee otú m ga-eme SEO". Ma mgbe ejiri ya mee ihe n’okpuru isiokwu ọ bụla, ọ na-ebute ederede ugboro ugboro.
Google ọ ga - enye anyị ọkwa maka isiokwu ọzọ m na - anaghị eji mgbe obere oge gachara?
Gugulu bu igwe ihe nchoputa. Ọ maara na okwu abụọ ahụ nwere ihe ha pụtara nke ọma na ọ ga-akwụghachi gị ụgwọ ma ọ bụrụ na ọdịnaya gị nwere isi n'ezie. N'ezie, ọ ka dị mkpa karịa ịdepụta ọdịnaya zuru ezu gbasara SEO How-To, nyochaa saịtị ndị n'usoro n'okwu ị kpọtụrụ ma mee ihe kwekọrọ na ya. Ọgwụgwụ nke ihe niile ga-aga nyocha ndị asọmpi. N'ime isiokwu a, n'ime njikọ ndị ahụ, n'ime mgbasa ozi 😊
7.Right Open - Isi mmalite
Have mepụtala saịtị blọọgụ na e-azụmahịa rue ugbu a.
Dị ka ahụmịhe gị si dị, ọ bụrụ na ị kwuo iche iche maka blog na e-azụmahịa; Kedu usoro ikpo okwu ị na-enweta ọtụtụ ndị ọbịa?
Ebumnuche ọchụchọ nke ndị ọzọ ahụ dị iche. Otu na-ejikarị eme ihe iji zụta ihe kpọmkwem, mmadụ iji nweta ozi ma ọ bụ duzie ya.
N'akụkụ ahịa e-commerce, ịtụle nke otu na-arụ ọrụ dị mkpa karị. Achọghị m pụtara peeji ngwaahịa na ibe ndị ọzọ ekwesịrị ileghara anya ebe a. Enwere mkpa maka nkọwa ngwaahịa na-ere na ibe ngwaahịa, foto dị elu, na asọmpi asọmpi.
N'akụkụ blog, ihe ịga nke ọma na-ewepụta ọdịnaya dị oke mma, na-agbaso SEO isi ihe dị ukwuu, na ịme onwe anyị.
8. Midfield - Ntinye n'ime
Kedu ihe anyị nwere ike ime nke na-arụ ọrụ nke ọma na ibe nbudata anyị?
M mgbe niile ụjọ na-eme ihe na aha nke esịtidem njikarịcha m peeji nke ezi nkezi ọnọdụ na mma organic okporo ụzọ. Eeh, ihe adighi nma, mana mgbe edeziri ya, inwere ike iga na onodu ojoo di egwu na okwu ahu di na 1.
Ana m etinye ihe egwu a, aha m, meta nkọwa na njirisi yiri ya ezighi ezi, echela 1 nkeji ma ọ bụrụ na ị kwuo na ị ga-edozi ha.
Anyị kwesịrị ịkwalite ọsọ nke mkpanaka na desktọọpụ, ma chọọ ụzọ isi mee ihe a ga-eme nke ọma n'akụkụ ahụmịhe onye ọrụ.
Kedu ihe aha H1 kwesịrị ịbụ? Nkwupụta nke saịtị ahụ? Ọ bụ isiokwu ọ kacha masị ya? Ọ bụ ika?
Ọ ga-amasị m inye azịza doro anya: Akara
9. Striker - Njikọ
Usoro ị na-enye site na ikikere Scrog Frog dị ịtụnanya. Ana m ahapụ vidiyo gị na njedebe ajụjụ.
Enwere m akwụkwọ ntanetị ma ana m enye ozi zuru oke, mana enwere ụzọ ọzọ m nwere mmasị na ihe ọ na-enye. Achọrọ m onye ọbịa m ịgụ ozi ahụ yana m na-eduzi. Dị ka m na-ekwu maka isiokwu na vidiyo gị na nyochaa a ma nye ntuziaka.
Ijikọ saịtị ndị ọzọ ọ ga-ebelata uru saịtị m bara?
Ọ bụrụ na saịtị ahụ ị ga-ezo aka abụghị saịtị na-akwadoghị ma na-abaghị uru, ọ gaghị emerụ ahụ. Yabụ, ijikọ saịtị ayhankaraman.com agaghị emerụ gị ahụ. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ nwere obi ụtọ, ha na-enwe obi ụtọ na Google.
10. Iwe Midfielder iwe - Ọdịnaya na SEO
Ebee ka anyị nwere ike ịgbaso mkpebi ọhụrụ na mmelite Google na SEO n'ụzọ kachasị mma?
Si ebe a: https://developers.google.com/search/docs
11. N'aka ekpe - Mobile
Anyị ga-achọ ịjụ ajụjụ a gbasara usoro nke ekwentị na kọmputa. Anyị chere na ọ bụ okwu dị mkpa n'ezie, mana ka anyị na-akwado saịtị anyị, anyị mere nyocha a, mana anyị enweghị ike ịchọta azịza ya na ịntanetị.
Ugboro ole ka isi okwu na paragraf kwesịrị ịdị na kọmputa na ekwentị?
Ana m ahapụ H1 26px ndị ọzọ nkụnye eji isi mee hierarchically. Ana m eji ederede dị ka 13px. Mobile na desktọọpụ bụ otu.
Are bụ onye anyị na-ewere dịka ihe atụ gbasara usoro mgbasa ozi. N'adịghị ka ọdịnala, mgbagha na ịnye ọnụ ọgụgụ nke echiche gị na mgbasa ozi gị bụ ihe kpatara anyị iji soro ọrụ gị niile.
Akụkọ Ayhan Karaman
Anyị gbara ajụjụ ọnụ Koray Tuğberk Gübur banyere SEO maka gị. Isi;
Adept | Mmmmmmmmmm
07/08/2021 at 06:10 - zaghachi
Ọ masịrị m na ị na -ekerịta ụfọdụ akụkọ, ajụjụ ọnụ na ozi na -adịghị ahụkebe.
Ị chetụla echiche ịbụ onye edemede ọbịa na blọọgụ ndị ọzọ? Enwere m blọgụ gbadoro anya na isiokwu ndị ị na -atụle. Ama m na ị ga -anụ ụtọ echiche m.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị nke ukwuu, nweere onwe gị izitere m email.
09/08/2021 at 13:37 - zaghachi
Ndewo, nke mbụ ekele gị maka okwu gị bara uru. Mmmmmmmmmm
Anyị nyochara njikọ akụkọ ị nyefere mgbe anyị na -edejupụta akwụkwọ nkọwa. Anyị hụrụ na ị na -enye ngwugwu azụlink ngwa ngwa na enweghị ntụkwasị obi wee nye ozi gbasara ya.
O di nwute, anyị enweghị mmasị na ọmụmụ SEO na -eduga n'ụzọ ndị dị otú a. Mgbe ị na -arụ ọrụ n'ụzọ dị mma ma na -arụ ọrụ nke ọma, anyị nwere ike izute n'otu oge. Mgbe ahụ anyị ga -enwe nganga ịmara gị, ịmụta na ịkụzi site na imekọ ihe ọnụ!